Before Midnight 2013 – Myanmar Subtitles
Genre: Drama, Romance Director: Richard Linklater Actors: Ethan Hawke, Jennifer Prior, Julie Delpy, Seamus Davey-Fitzpatrick Country: Greece, USA Released: 14 Jun 2013 Score: 7.9 Duration: 109 min Quality: Bluray 1080p Years: 2013 View: 1,614
*Before Sunrise*, *Before Sunset*, *Before Midnight*
တျောတျောလေးကိုကောငျးတဲ့ဇာတျကားလေးသုံးကားလောကျတငျပါမယျ။ အားလုံးပဲ Download ဆှဲကွညျ့ဖို့အသငျ့ဖွဈအောငျလုပျထားကွပါ။
ဟိုးအရငျတုနျးကဇာတျကားတှဖွေဈတဲ့အတှကျကွောငျ့မလို့ ကွညျ့ရှူသူမြား မကွညျမလငျမှုနျဝါးဝါး Resolution နဲ့ကွညျ့ရှူရမှာစိုးတဲ့အတှကျကွောငျ့မလို့
1080p တှနေဲ့ပဲအားလုံးကို Encode ပေးထားတာဖွဈပါတယျ။
Download type – Gofiles, Filerocks, Archive, Openload
Download Size – Before Sunrise (1.74GB), Before Sunset (1.38GB), Before Midnight (1.65GB)
(၁၈) နှဈ ကွာအောငျ ဇတျလမျးတညျပွီး ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ ရုပျရှငျသုံးကား . .
အလှဆုံး အရှညျလြားဆုံး အခဈြကဗြာကလေး
အမရေိက က လာတဲ့ ကောငျလေးတဈယောကျ။ နာမညျက Jesse တဲ့။
ပွငျသဈက လာတဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျ။ နာမညျက Celine တဲ့။
ဥရောပ ထဲက နိုငျငံကူး ရထားတဈစငျးပျေါမှာ ပထမဆုံး စ ပွီး ဆုံတှကွေ့တယျ။ သူတို့မှာ မတူညီတဲ့ သှားစရာတှေ ရှိနတေယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့နှဈယောကျလုံး အဲ့ဒီ မိနဈပိုငျးလေးအတှငျးမှာပဲ အခကျြ (၂) ခကျြ ကို သဘောတူခဲ့ကွတယျ။
(၁) ရှတေ့ဈဘူတာမှာ ရောကျမယျ့ Vienna မွို့လေးမှာ သူတို့ ဆငျးကွမယျ။
(၂) တဈနလေုံ့း တဈညလုံး စကားတှပွေောကွမယျ။ လြှောကျသှားကွမယျ။ နောကျနေ့ မနကျ မိုးလငျးမှ ကိုယျ သှားခငျြတဲ့ နိုငျငံကို ဆကျသှားမယျ။
အဲ့ဒီတဈညလုံး သူတို့ သှားခငျြရာသှားကွတယျ။ စကားအလုံးပေါငျး သောငျးနဲ့ခြီပွီး တတှတျတှတျ ပွောကွတယျ။ နိုငျငံရေး လူမှုရေး ဒဿန . . အစုံပါပဲ။ သူတို့ လုပျခငျြရာတှေ လုပျကွတယျ။ မွငျယောငျကွညျ့ပေါ့။ Jesse သို့မဟုတျ Celine နရောမှာ ကိုယျသာဆိုရငျ . . ဘယျလောကျ ကဗြာဆနျလိမျ့မလဲ။
နောကျနမေ့နကျမိုးလငျးတော့ . . သူတို့လမျးခှဲရတော့မယျလေ။ သှားစရာ လုပျစရာတှေ ဆကျလုပျရတော့မယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီတိုငျး လမျးမခှဲဘူး။ နောကျ ခွောကျလ အကွာမှာ ဒီနရော ဒီအခြိနျမှာပဲ ပွနျ တှကွေ့မယျလို့ ခြိနျးလိုကျကွတယျ။ တဈယောကျဖုနျး နံပါတျကို တဈယောကျ မယူလိုကျကွဘူး။ သူတို့ကိုယျ သူတို့ ခွောကျလ အကွာမှာ သခြောပေါကျ ပွနျတှမေ့ယျဆိုတာ လုံးဝ ယုံကွညျနကွေတယျ။
ဒါပမေယျ့ . . . .
ဘာလို့ ဒီ အခဈြဇာတျလမျးလေးကို ဒါရိုကျတာက ၁၈ နှဈတောငျ ကွာအောငျ ရိုကျကူးခဲ့တာလဲ?
*Before Sunrise / Before Sunset / Before Midnight *
ဒီ ရုပျရှငျကား သုံးကား ဟာ တကယျပဲ ၁၈ နှဈ တိတိ ကွာအောငျ ရိုကျကူးခဲ့ပါတယျ။
ပထမဆုံး ကား နာမညျက Before Sunrise တဲ့။ ၁၉၉၅ ခုနှဈမှာ ထှကျတယျ။
ဒုတိယ ကား နာမညျက Before Sunset တဲ့။ ၂၀၀၄ ခုနှဈမှာ ထှကျတယျ။
တတိယ ကား နာမညျက Before Midnight တဲ့။ ၂၀၁၃ ခုနှဈမှာ ထှကျတယျ။
တဈကားနဲ့ တဈကားကွားမှာ ကိုးနှဈ ကွာတယျ။ အားလုံးပေါငျးရငျ ၁၈ နှဈ ကွာတယျ။ တကယျ့ ရုပျရှငျထဲက Jesse နဲ့ Celine တို့ရဲ့ အသကျတှဟောလညျး နောကျဆုံး ကား ထှကျပွီးခြိနျမှာ ၁၈ နှဈ ကွီးသှားပါတယျ။ တကယျ့ အပွငျမှာ လူရဲ့ အသကျအတိုငျးပဲ character တှကေလညျး အသကျကွီးလာကွတယျ။
ဒီ ကားတှရေဲ့ ဖနျတီးပဲ့ကျိုငျရှငျ ဒါရိုကျတာကွီးရဲ့ နာမညျက Richard Linklater တဲ့။ ဒီ ဘဲကွီးက သူ့ရုပျရှငျတှမှော အခြိနျကို တကယျ့ အခြိနျ အစဈ သုံးရတာ အတျော သဘောကတြဲ့ပုံပဲ။ သူ့ ဇာတျရုပျတှကေို တကယျ့ အခြိနျအတိုငျး ကွီးပွငျး ပွောငျးလဲလာစတေယျ။ Boyhood ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျဆိုရငျ အဲ့ဒီ တဈကားထဲကို သူရိုကျတာ ၁၂ နှဈ ကွာတယျ။ တကယျ့ အပွငျက ၁၂ ဆိုတဲ့ အခြိနျအတိုငျးပဲ ဇာတျလမျးထဲက အခြိနျကလညျး ၁၂ နှဈ ကွာတယျ။ မိသားစု တဈစုရဲ့ ၁၂ နှဈ ကွာ ဖွတျသနျးမှု အတကျအကြ ဘဝဇာတျခုံကို တကယျ ပွသှားတာပါ။ မကျြစိရှမှေ့ာတငျ တဈမိနဈပွီး တဈမိနဈ ဒီ မိသားစုဟာ အသကျ တဖွညျးဖွညျးကွီးလာတယျ။ အတှေးအချေါတှေ ပွောငျးလာတယျ။ တကယျ့ လူသားအစဈတှကေို ကွညျ့နသေလို အံ့သွစရာကွီး။
Before Trilogy သုံးကားမှာလညျး Jesse နဲ့ Celine တို့ဟာ တဈကား ပွီးသှားခြိနျမှာ တကယျ ၉ နှဈ ကွာသှားတယျ။ နောကျတဈကား ပွီးသှားခြိနျမှာ နောကျထပျ ၉ နှဈ ထပျကွာတယျ။ သူတို့ရဲ့ အခဈြတှဟော ဘာတှေ ဖွဈသှားသလဲ . . သူတို့ ဘယျလိုကှဲသှားသလဲ . . သူတို့ ဘယျလို ပွနျတှသေ့လဲ . . ကတော့ ရုပျရှငျထဲမှာ ပဲ အသေးစိတျကွညျ့လိုကျပါ။ ပထမဦးဆုံး ကြှနျတျော ပွောခဲ့တဲ့ ခွောကျလ အကွာမှာ သူတို့ ပွနျတှကွေ့မယျလို့ ခြိနျးတဲ့ ကိစ်စကိုလညျး တကယျ ပွနျတှကွေ့လား မတှကွေ့ဘူးလားဆိုတာ ကိုယျတိုငျပဲ ကွညျ့လိုကျကွပါ။
ဒါပမေယျ့ သခြောတာကတော့ ဒါရိုကျတာကွီး Linklater ရိုကျတဲ့ကားတိုငျးမှာ အဓိက ဇာတျကောငျက အခြိနျပဲ။ ဒီအခြိနျ အစဈကွီးရဲ့ ပွောငျးလဲမှုအတိုငျး တကယျ လိုကျရိုကျနိုငျတဲ့ ဒါရိုကျတာရဲ့ သတ်တိကို အံ့သွတယျ။ မတျောတဆ ဒီ ဇာတျကောငျတှေ အလုပျထှကျသှားရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ? မတျောတဆ ဒီဇာတျကောငျတှေ accident တဈခုခုဖွဈရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ? သူကိုယျတိုငျလညျး တဈခုခု မဖွဈနိုငျဘူးလား? ငှထေုတျပေးသူတှကေော စိတျမပွောငျးသှားနိုငျဘူးလား? ကွညျ့တဲ့ ပရိတျသတျကော တကယျ စိတျဝငျစားပါ့မလား? ဒီလောကျ အကွာကွီး ရိုကျပွီးမှ ဂှမျးသှားရငျကော?
မေးခှနျးတှေ အမြားကွီးပါ။ ဒါပမေယျ့ သူဟာ သူ သနျမာ ရာ လမျးကွောငျးအတိုငျး သဝမေတိမျး ဇှဲကွီးကွီးနဲ့ လိုကျပါရငျး အခြိနျအစဈတှေ သုံးပွီး ကွာမွငျ့စှာ ခကျခဲစှာ ရိုကျကူးရတဲ့ ရုပျရှငျကားတှကေို တဈဘဝလုံး နှဈမွုပျရိုကျကူးလကျြ ရှိပါတယျ။ ကွာခြိနျတှကေလညျး လေး ငါး နှဈ မဟုတျဘူး။ ဆယျ နဲ့ ခြီတာတှေ ခညျြးပဲ။
Before Sunset မှာဆိုရငျ ရုပျရှငျ ကွာမွငျ့ခြိနျက မိနဈ ၈၀ ရှိတယျ။ တကယျ့ အပွငျအခြိနျ မိနဈ ၈၀ အတိုငျး ဒီကားကို သူရိုကျသှားတယျ။ ဇာတျကားတဈကားလုံးက မိနဈ ၈၀ အတှငျး ဖွဈပကျြသှားတာတှေ ခညျြးပဲ။
ဟောဒီ Before Trilogy ကွီးရဲ့ အဓိက မငျးသားကွီး Jesse နရောမှာ Ethan Hawke သရုပျဆောငျပါတယျ။ အဓိက မငျးသမီးကွီး Celine နရောမှာ Julie Delpy သရုပျဆောငျပါတယျ။ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ ခှနျအားရှိတဲ့ သဘာဝအရမျးကတြဲ့ အစဈအတိုငျး ဖွဈနတေဲ့ ၁၈ နှဈကွာ character တဈခုတညျးမှာ နရေဲတဲ့ သရုပျဆောငျမှုကို ဒီကား သုံးကားမှာ မွငျရပါလိမျ့မယျ။
သရုပျဆောငျ ကောငျးတယျဆိုတာ ဘာကိုပွောတာလဲ? အပွငျမှာ တကယျမပွောတဲ့ စကားတှေ ပွောတာလား? အပွငျမှာ ဘယျသူမှ မလုပျတဲ့ မကျြနှာမဲ့ရှဲ့ပွတာမြိုးလား? မဟုတျပါဘူး။
Hollywood က သရုပျဆောငျနညျးပွ တဈယောကျ ပွောဖူးတယျ။ Acting is not acting တဲ့။ ဒီနရောမှာ အမသေသှေားတဲ့အခနျးဆိုရငျ အမေ သရေငျ ငါ ငိုရမယျ။ နှပျခြေးထှကျရမယျ။ လှဲကသြှားရမယျ။ အဲ့ဒီလို အဆငျ့လိုကျ အကုနျမှတျပွီး ကငျမရာရှမှေ့ာ လုပျပွရတာ မဟုတျဘူးတဲ့။ အမေ သတောကို တကယျကွုံရတဲ့ လူတဈယောကျက သူ မကျြရညျ တောငျ ထှကျခငျြမှ ထှကျမယျ။ သူ ငိုငျငိုငျကွီးနခေငျြ နမေယျ။ သူ မလှေဲ့ကောငျး မလှေဲ့မယျ။ သူ မကျြနှာကို လှဲရငျလှဲထားမယျ။ ဘယျသူမှ မသိနိုငျဘူး။ သူ့ တကယျ့ ခံစားခကျြ အစဈက အမသေသှေားတာကို ဘယျလို တုနျ့ပွနျသလဲ . . ဘယျသူမှ မသိဘူး။
ခငျဗြားဆိုရငျကော ဘာဖွဈမလဲ။ ခငျဗြားကိုယျတိုငျလညျး မသိနိုငျဘူး။ အဲ့ဒီ unseen ခံစားခကျြကွီးကို လုပျပွသှားတာကိုမှ သဘာဝ ကတြယျလို့ သတျမှတျနိုငျတယျ။ အဲ့ဒီလို သဘာဝကအြောငျ သရုပျဆောငျနိုငျရငျ သရုပျဆောငျကောငျးတယျလို့ အခွခေံအားဖွငျ့ သတျမှတျနိုငျပါတယျ။
အဲ့ဒါမြိုး တကယျ့ ခံစားခကျြ အစဈတှေ ထုတျပွီး သရုပျဆောငျနိုငျအောငျ ဘယျလိုလုပျလဲ? အဲ့ဒီမှာ သရုပျဆောငျ ကောငျး မကောငျးက စကားပွောပါတယျ။ အဲ့ဒီပညာကို Hollywood က သရုပျဆောငျကွီးမြားက နှဈကို ဆယျနဲ့ ခြီပွီး သငျကွားခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီကားမှာ Jesse နဲ့ Celine တို့ သရုပျဆောငျနကွေတာဟာ ကြှနျတျောတို့ မကျြစိရှမှေ့ာ လူအစဈ နှဈယောကျကို တကယျကွညျ့နရေသလို အငျမတနျ သဘာဝကကြွတယျ။ နှဈတှေ အမြားကွီးကွာမှ ပွနျတှလေို့လညျး ငိုပွဲပွီး ပွေးမဖကျကွဘူး။ ခှဲခှါရတော့လညျး နှပျခြေးတှထှေကျပွီး မငိုကွပွနျဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ တကယျ့ရငျထဲက ခံစားခကျြ အစဈကို ဆှဲထုတျပွီး အဲ့ဒီ ခံစားခကျြ အစဈ အတိုငျး သရုပျဆောငျသှားကွလို့ပါ။ ဘာ အပို တဈခုမှ မလုပျသှားဘူး။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ သူတို့ နှဈယောကျကို ယုံကွညျတယျ။ ဒါကိုမှ ဒါရိုကျတာကွီး Linklater ရဲ့ အခြိနျအစဈ သုံးရဲတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ ပေါငျးစပျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာတော့ . . အားပါးပါး . . ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး အခဈြကားမြား စာရငျးတိုငျးမှာ ဒီသုံးကား အမွဲ ပါနပေါတော့တယျ။ မယုံရငျ ကွိုကျသလို ဖငျပွနျခေါငျးပွနျ google ကွညျ့ကွပေါ့ဗြာ။
ဇာတျဝငျတေးတှေ ဇာတျလမျးရဲ့ အရောငျအသှေးတှေ ကငျမရာယူဆလှုပျရှားသှားလာမှုတှေ အထူးသဖွငျ့ မငျးသား မငျးသမီးတို့ နှဈယောကျ ပွောနကွေတဲ့ စကားတှဟော . . ဇာတျနဲ့ လိုကျဖကျတယျ။ သဘာဝကတြယျ။ ခဈြဖို့ကောငျးတယျ။ ယဉျယဉျကြေးကြေးပွောရရငျ ခမျးနားတယျ။ ခပျရိုငျးရိုငျးပွောရရငျ စောကျရမျးမိုကျတယျ။
မိတျကပျ မဟုတျတဲ့ တကယျ့ အသကျအရှယျ ပွောငျးလဲမှုတှေ မွငျရမယျ။ လကျတှဲဖွုတျတော့မှာလား ခှဲခှါကွတော့မှာလား မခဈြတော့ဘူးလား တဈသကျလုံး ခဈြနကွေမှာပါနျော . . မဟုတျလောကျဘူးထငျတယျ . . စ တဲ့ . . လူပီသတဲ့ စိုးရိမျစိတျတှေ ဟာ ဒီကားသုံးကား ကွညျ့နတေုနျး ကြှနျတျောတို့ ခေါငျးထဲမှာ ဝဲနမေယျ့ အတှေးတှပေါ။
အိမျဘေးမှာ နတေဲ့ အရမျးခဈြတတျတဲ့ အဈကိုကွီးနဲ့ အရမျး ကဗြာဆနျတဲ့ သူ့ကောငျမလေး တို့ရဲ့ ဇာတျလမျးကို နတေို့ငျး မွငျနရေသလို ၁၈ နှဈကွာတဲ့ အခဈြဇာတျလမျးတဈပုဒျကို ခငျဗြားတို့ မကျြမွငျကိုယျတှေ့ ကွုံရမှာပါ။
ကြှနျတေျာ့အဖို့တော့ ဒီသုံးကားထဲ အကွိုကျဆုံးက အလယျက ကား Before Sunset (2004) ပါပဲ။ ကိုးနှဈကွာပွီးသှားခြိနျမှာ Jesse နဲ့ Celine တို့ တဈယောကျကို တဈယောကျ ဖကျ မငိုကွဘူး။ ဒီကား ပွီးခါနီးလလေေ သူတို့ ဆကျတှဲမှာလား ကှဲတော့မှာလား စိုးရိမျစိတျက မွငျ့လာတယျ။ အနညျးဆုံးတော့ ဖုနျးနံပါတျလေး လှဲကွပါတော့ဟ . . email လောကျတော့ ပို့ကွပါဟ . . ခဈြတယျလို့ ပွောကွပါတော့ဟ . . လကျထပျခှငျ့တှေ ပါတှေ ကောကျတောငျးပဈပါတော့ဟ . . ကြှနျတျော တဈယောကျထဲ တိုကျပှဲတှေ ဝငျနတေော့တယျ။ ဒီကားထဲမှာ မငျးသမီးလေး Celine က Notra Dame ဘုရားကြောငျးကွီးကို လကျညိုးထိုးရငျး “ one day . . Notra Dame will be gone ” လို့ ပွောသှားတယျ။ ဒီလောကျ ခိုငျမာပွီး ကမ်ဘာ့အမှအေနှဈတှပွေညျ့နတေဲ့ ပွငျသဈပွညျက ဘုရားကြောငျးကွီး . . ဘယျလိုလုပျ ပြောကျကှယျသှားနိုငျမလဲဗြာ။ ကြှနျတျောတို့ တှေးခဲ့ကွတယျ။ ဒါပမေယျ့ သိပျမကွာခငျကပဲ Notra Dame ကွီး မီးလောငျသှားရှာတာ တဈကမ်ဘာလုံး ဝမျးနညျးပကျလကျ မွငျခဲ့ရတယျ။
ထားပါတော့လေ။ ကြှနျတျော ဒီ အခဈြစာကို အဆုံးသတျတော့မယျ။
မွငျယောငျကွညျ့ပေါ့ဗြာ။ ခငျဗြားကိုယျတိုငျသာ ဥရောပ နိုငျငံ တဈနိုငျငံပျေါက ရထားပျေါမှာ ကောငျလေး သို့မဟုတျ ကောငျမလေး ခြောခြော တဈယောကျကို မွငျသှားမယျ။ ဒါမှမဟုတျလညျး ကြောငျးကနျတငျး တဈခုမှာ ဖွဈမှာပေါ့။ ဒါမှ မဟုတျလညျး ပှဲတဈပှဲမှာ ဖွဈမှာပေါ့။ ဒါမှမဟုတျလညျး facebook ပျေါမှာ ဖွဈမှာပေါ့။ ဒါမှ မဟုတျလညျး ခရီးသှားရငျး ဖွဈမှာပေါ့။ ခငျဗြား သူ့ကို စကားသှားပွောမယျ။ နောကျတော့ ခငျဗြားမိဘတှေ သူငယျခငျြးတှေ ဆှမြေိုးတှေ အလုပျကိစ်စတှေ စတဲ့ ခြိနျးဆိုထားတာ အားလုံးကိုမပွေီ့း သူနဲ့အတူတူ လုပျခငျြရာ လြှောကျလုပျကွတယျ။
ပိုရငျခုနျဖို့ကောငျးတာက အဲ့ဒီနလေ့ေးဟာ ခငျဗြား တဈဘဝလုံးကို အကွီးအကယျြ ပွောငျးလဲပဈမယျ့ နကေ့လေး ဖွဈလာမယျ။ သူကလေးဟာ ခငျဗြား ရဲ့ နှဈ ၆၀ – ၇၀ ကြျော ကွာမယျ့ ဘဝထဲကို ၂၄ နာရီလောကျနဲ့ ဝုနျးခနဲ ရောကျခလြာမှာ။ ရငျထဲ နှေးထှေးစရာကွီး။
အခြိနျထကျ ပိုလှတဲ့ ပနျးအမြိုးအစား ဒီကမ်ဘာမှာ မရှိလောကျဘူးထငျတယျ။ ဒီ ပနျးကလေးကို ဒါရိုကျတာကွီး Linklater က သူ့ ရုပျရှငျသုံးကားရဲ့ ဦးခေါငျးထကျမှာ ပနျဆငျပေးထားတယျ။ ပနျးကလေးတှနေားမှာ Jesse နဲ့ Celine ဆိုတဲ့ ပြားလေး နှဈကောငျ ရဈဝဲနတော ဒီနနေဲ့ဆို ၁၈ နှဈ ရှိပါပွီ။
ကဲ . . ခငျဗြား ဘာလုပျမှာလဲ???
တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားလေးသုံးကားလောက်တင်ပါမယ်။ အားလုံးပဲ Download ဆွဲကြည့်ဖို့အသင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားကြပါ။
ဟိုးအရင်တုန်းကဇာတ်ကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ကြည့်ရှူသူများ မကြည်မလင်မှုန်ဝါးဝါး Resolution နဲ့ကြည့်ရှူရမှာစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
1080p တွေနဲ့ပဲအားလုံးကို Encode ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
(၁၈) နှစ် ကြာအောင် ဇတ်လမ်းတည်ပြီး ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်သုံးကား . .
အလှဆုံး အရှည်လျားဆုံး အချစ်ကဗျာကလေး
အမေရိက က လာတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်။ နာမည်က Jesse တဲ့။
ပြင်သစ်က လာတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်။ နာမည်က Celine တဲ့။
ဥရောပ ထဲက နိုင်ငံကူး ရထားတစ်စင်းပေါ်မှာ ပထမဆုံး စ ပြီး ဆုံတွေ့ကြတယ်။ သူတို့မှာ မတူညီတဲ့ သွားစရာတွေ ရှိနေတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်လုံး အဲ့ဒီ မိနစ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲ အချက် (၂) ချက် ကို သဘောတူခဲ့ကြတယ်။
(၁) ရှေ့တစ်ဘူတာမှာ ရောက်မယ့် Vienna မြို့လေးမှာ သူတို့ ဆင်းကြမယ်။
(၂) တစ်နေ့လုံး တစ်ညလုံး စကားတွေပြောကြမယ်။ လျှောက်သွားကြမယ်။ နောက်နေ့ မနက် မိုးလင်းမှ ကိုယ် သွားချင်တဲ့ နိုင်ငံကို ဆက်သွားမယ်။
အဲ့ဒီတစ်ညလုံး သူတို့ သွားချင်ရာသွားကြတယ်။ စကားအလုံးပေါင်း သောင်းနဲ့ချီပြီး တတွတ်တွတ် ပြောကြတယ်။ နိုင်ငံရေး လူမှုရေး ဒဿန . . အစုံပါပဲ။ သူတို့ လုပ်ချင်ရာတွေ လုပ်ကြတယ်။ မြင်ယောင်ကြည့်ပေါ့။ Jesse သို့မဟုတ် Celine နေရာမှာ ကိုယ်သာဆိုရင် . . ဘယ်လောက် ကဗျာဆန်လိမ့်မလဲ။
နောက်နေ့မနက်မိုးလင်းတော့ . . သူတို့လမ်းခွဲရတော့မယ်လေ။ သွားစရာ လုပ်စရာတွေ ဆက်လုပ်ရတော့မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတိုင်း လမ်းမခွဲဘူး။ နောက် ခြောက်လ အကြာမှာ ဒီနေရာ ဒီအချိန်မှာပဲ ပြန် တွေ့ကြမယ်လို့ ချိန်းလိုက်ကြတယ်။ တစ်ယောက်ဖုန်း နံပါတ်ကို တစ်ယောက် မယူလိုက်ကြဘူး။ သူတို့ကိုယ် သူတို့ ခြောက်လ အကြာမှာ သေချာပေါက် ပြန်တွေ့မယ်ဆိုတာ လုံးဝ ယုံကြည်နေကြတယ်။
ဒါပေမယ့် . . . .
ဘာလို့ ဒီ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို ဒါရိုက်တာက ၁၈ နှစ်တောင် ကြာအောင် ရိုက်ကူးခဲ့တာလဲ?
ဒီ ရုပ်ရှင်ကား သုံးကား ဟာ တကယ်ပဲ ၁၈ နှစ် တိတိ ကြာအောင် ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံး ကား နာမည်က Before Sunrise တဲ့။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ ထွက်တယ်။
ဒုတိယ ကား နာမည်က Before Sunset တဲ့။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ထွက်တယ်။
တတိယ ကား နာမည်က Before Midnight တဲ့။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ထွက်တယ်။
တစ်ကားနဲ့ တစ်ကားကြားမှာ ကိုးနှစ် ကြာတယ်။ အားလုံးပေါင်းရင် ၁၈ နှစ် ကြာတယ်။ တကယ့် ရုပ်ရှင်ထဲက Jesse နဲ့ Celine တို့ရဲ့ အသက်တွေဟာလည်း နောက်ဆုံး ကား ထွက်ပြီးချိန်မှာ ၁၈ နှစ် ကြီးသွားပါတယ်။ တကယ့် အပြင်မှာ လူရဲ့ အသက်အတိုင်းပဲ character တွေကလည်း အသက်ကြီးလာကြတယ်။
ဒီ ကားတွေရဲ့ ဖန်တီးပဲ့ကိုင်ရှင် ဒါရိုက်တာကြီးရဲ့ နာမည်က Richard Linklater တဲ့။ ဒီ ဘဲကြီးက သူ့ရုပ်ရှင်တွေမှာ အချိန်ကို တကယ့် အချိန် အစစ် သုံးရတာ အတော် သဘောကျတဲ့ပုံပဲ။ သူ့ ဇာတ်ရုပ်တွေကို တကယ့် အချိန်အတိုင်း ကြီးပြင်း ပြောင်းလဲလာစေတယ်။ Boyhood ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဆိုရင် အဲ့ဒီ တစ်ကားထဲကို သူရိုက်တာ ၁၂ နှစ် ကြာတယ်။ တကယ့် အပြင်က ၁၂ ဆိုတဲ့ အချိန်အတိုင်းပဲ ဇာတ်လမ်းထဲက အချိန်ကလည်း ၁၂ နှစ် ကြာတယ်။ မိသားစု တစ်စုရဲ့ ၁၂ နှစ် ကြာ ဖြတ်သန်းမှု အတက်အကျ ဘဝဇာတ်ခုံကို တကယ် ပြသွားတာပါ။ မျက်စိရှေ့မှာတင် တစ်မိနစ်ပြီး တစ်မိနစ် ဒီ မိသားစုဟာ အသက် တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်။ အတွေးအခေါ်တွေ ပြောင်းလာတယ်။ တကယ့် လူသားအစစ်တွေကို ကြည့်နေသလို အံ့သြစရာကြီး။
Before Trilogy သုံးကားမှာလည်း Jesse နဲ့ Celine တို့ဟာ တစ်ကား ပြီးသွားချိန်မှာ တကယ် ၉ နှစ် ကြာသွားတယ်။ နောက်တစ်ကား ပြီးသွားချိန်မှာ နောက်ထပ် ၉ နှစ် ထပ်ကြာတယ်။ သူတို့ရဲ့ အချစ်တွေဟာ ဘာတွေ ဖြစ်သွားသလဲ . . သူတို့ ဘယ်လိုကွဲသွားသလဲ . . သူတို့ ဘယ်လို ပြန်တွေ့သလဲ . . ကတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ပဲ အသေးစိတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ပထမဦးဆုံး ကျွန်တော် ပြောခဲ့တဲ့ ခြောက်လ အကြာမှာ သူတို့ ပြန်တွေ့ကြမယ်လို့ ချိန်းတဲ့ ကိစ္စကိုလည်း တကယ် ပြန်တွေ့ကြလား မတွေ့ကြဘူးလားဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ပဲ ကြည့်လိုက်ကြပါ။
ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ ဒါရိုက်တာကြီး Linklater ရိုက်တဲ့ကားတိုင်းမှာ အဓိက ဇာတ်ကောင်က အချိန်ပဲ။ ဒီအချိန် အစစ်ကြီးရဲ့ ပြောင်းလဲမှုအတိုင်း တကယ် လိုက်ရိုက်နိုင်တဲ့ ဒါရိုက်တာရဲ့ သတ္တိကို အံ့သြတယ်။ မတော်တဆ ဒီ ဇာတ်ကောင်တွေ အလုပ်ထွက်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? မတော်တဆ ဒီဇာတ်ကောင်တွေ accident တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? သူကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ခုခု မဖြစ်နိုင်ဘူးလား? ငွေထုတ်ပေးသူတွေကော စိတ်မပြောင်းသွားနိုင်ဘူးလား? ကြည့်တဲ့ ပရိတ်သတ်ကော တကယ် စိတ်ဝင်စားပါ့မလား? ဒီလောက် အကြာကြီး ရိုက်ပြီးမှ ဂွမ်းသွားရင်ကော?
မေးခွန်းတွေ အများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ သူ သန်မာ ရာ လမ်းကြောင်းအတိုင်း သဝေမတိမ်း ဇွဲကြီးကြီးနဲ့ လိုက်ပါရင်း အချိန်အစစ်တွေ သုံးပြီး ကြာမြင့်စွာ ခက်ခဲစွာ ရိုက်ကူးရတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို တစ်ဘဝလုံး နှစ်မြုပ်ရိုက်ကူးလျက် ရှိပါတယ်။ ကြာချိန်တွေကလည်း လေး ငါး နှစ် မဟုတ်ဘူး။ ဆယ် နဲ့ ချီတာတွေ ချည်းပဲ။
Before Sunset မှာဆိုရင် ရုပ်ရှင် ကြာမြင့်ချိန်က မိနစ် ၈၀ ရှိတယ်။ တကယ့် အပြင်အချိန် မိနစ် ၈၀ အတိုင်း ဒီကားကို သူရိုက်သွားတယ်။ ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံးက မိနစ် ၈၀ အတွင်း ဖြစ်ပျက်သွားတာတွေ ချည်းပဲ။
ဟောဒီ Before Trilogy ကြီးရဲ့ အဓိက မင်းသားကြီး Jesse နေရာမှာ Ethan Hawke သရုပ်ဆောင်ပါတယ်။ အဓိက မင်းသမီးကြီး Celine နေရာမှာ Julie Delpy သရုပ်ဆောင်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ခွန်အားရှိတဲ့ သဘာဝအရမ်းကျတဲ့ အစစ်အတိုင်း ဖြစ်နေတဲ့ ၁၈ နှစ်ကြာ character တစ်ခုတည်းမှာ နေရဲတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုကို ဒီကား သုံးကားမှာ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
သရုပ်ဆောင် ကောင်းတယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ? အပြင်မှာ တကယ်မပြောတဲ့ စကားတွေ ပြောတာလား? အပြင်မှာ ဘယ်သူမှ မလုပ်တဲ့ မျက်နှာမဲ့ရွဲ့ပြတာမျိုးလား? မဟုတ်ပါဘူး။
Hollywood က သရုပ်ဆောင်နည်းပြ တစ်ယောက် ပြောဖူးတယ်။ Acting is not acting တဲ့။ ဒီနေရာမှာ အမေသေသွားတဲ့အခန်းဆိုရင် အမေ သေရင် ငါ ငိုရမယ်။ နှပ်ချေးထွက်ရမယ်။ လှဲကျသွားရမယ်။ အဲ့ဒီလို အဆင့်လိုက် အကုန်မှတ်ပြီး ကင်မရာရှေ့မှာ လုပ်ပြရတာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ အမေ သေတာကို တကယ်ကြုံရတဲ့ လူတစ်ယောက်က သူ မျက်ရည် တောင် ထွက်ချင်မှ ထွက်မယ်။ သူ ငိုင်ငိုင်ကြီးနေချင် နေမယ်။ သူ မေ့လှဲကောင်း မေ့လှဲမယ်။ သူ မျက်နှာကို လွဲရင်လွဲထားမယ်။ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ဘူး။ သူ့ တကယ့် ခံစားချက် အစစ်က အမေသေသွားတာကို ဘယ်လို တုန့်ပြန်သလဲ . . ဘယ်သူမှ မသိဘူး။
ခင်ဗျားဆိုရင်ကော ဘာဖြစ်မလဲ။ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်လည်း မသိနိုင်ဘူး။ အဲ့ဒီ unseen ခံစားချက်ကြီးကို လုပ်ပြသွားတာကိုမှ သဘာဝ ကျတယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်တယ်။ အဲ့ဒီလို သဘာဝကျအောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ရင် သရုပ်ဆောင်ကောင်းတယ်လို့ အခြေခံအားဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒါမျိုး တကယ့် ခံစားချက် အစစ်တွေ ထုတ်ပြီး သရုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်လဲ? အဲ့ဒီမှာ သရုပ်ဆောင် ကောင်း မကောင်းက စကားပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီပညာကို Hollywood က သရုပ်ဆောင်ကြီးများက နှစ်ကို ဆယ်နဲ့ ချီပြီး သင်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကားမှာ Jesse နဲ့ Celine တို့ သရုပ်ဆောင်နေကြတာဟာ ကျွန်တော်တို့ မျက်စိရှေ့မှာ လူအစစ် နှစ်ယောက်ကို တကယ်ကြည့်နေရသလို အင်မတန် သဘာဝကျကြတယ်။ နှစ်တွေ အများကြီးကြာမှ ပြန်တွေ့လို့လည်း ငိုပြဲပြီး ပြေးမဖက်ကြဘူး။ ခွဲခွါရတော့လည်း နှပ်ချေးတွေထွက်ပြီး မငိုကြပြန်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ တကယ့်ရင်ထဲက ခံစားချက် အစစ်ကို ဆွဲထုတ်ပြီး အဲ့ဒီ ခံစားချက် အစစ် အတိုင်း သရုပ်ဆောင်သွားကြလို့ပါ။ ဘာ အပို တစ်ခုမှ မလုပ်သွားဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ သူတို့ နှစ်ယောက်ကို ယုံကြည်တယ်။ ဒါကိုမှ ဒါရိုက်တာကြီး Linklater ရဲ့ အချိန်အစစ် သုံးရဲတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ . . အားပါးပါး . . ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အချစ်ကားများ စာရင်းတိုင်းမှာ ဒီသုံးကား အမြဲ ပါနေပါတော့တယ်။ မယုံရင် ကြိုက်သလို ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန် google ကြည့်ကြပေါ့ဗျာ။
ဇာတ်ဝင်တေးတွေ ဇာတ်လမ်းရဲ့ အရောင်အသွေးတွေ ကင်မရာယူဆလှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေ အထူးသဖြင့် မင်းသား မင်းသမီးတို့ နှစ်ယောက် ပြောနေကြတဲ့ စကားတွေဟာ . . ဇာတ်နဲ့ လိုက်ဖက်တယ်။ သဘာဝကျတယ်။ ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောရရင် ခမ်းနားတယ်။ ခပ်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် စောက်ရမ်းမိုက်တယ်။
မိတ်ကပ် မဟုတ်တဲ့ တကယ့် အသက်အရွယ် ပြောင်းလဲမှုတွေ မြင်ရမယ်။ လက်တွဲဖြုတ်တော့မှာလား ခွဲခွါကြတော့မှာလား မချစ်တော့ဘူးလား တစ်သက်လုံး ချစ်နေကြမှာပါနော် . . မဟုတ်လောက်ဘူးထင်တယ် . . စ တဲ့ . . လူပီသတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေ ဟာ ဒီကားသုံးကား ကြည့်နေတုန်း ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းထဲမှာ ဝဲနေမယ့် အတွေးတွေပါ။
အိမ်ဘေးမှာ နေတဲ့ အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ အစ်ကိုကြီးနဲ့ အရမ်း ကဗျာဆန်တဲ့ သူ့ကောင်မလေး တို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို နေ့တိုင်း မြင်နေရသလို ၁၈ နှစ်ကြာတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ခင်ဗျားတို့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံရမှာပါ။
ကျွန်တော့်အဖို့တော့ ဒီသုံးကားထဲ အကြိုက်ဆုံးက အလယ်က ကား Before Sunset (2004) ပါပဲ။ ကိုးနှစ်ကြာပြီးသွားချိန်မှာ Jesse နဲ့ Celine တို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဖက် မငိုကြဘူး။ ဒီကား ပြီးခါနီးလေလေ သူတို့ ဆက်တွဲမှာလား ကွဲတော့မှာလား စိုးရိမ်စိတ်က မြင့်လာတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ဖုန်းနံပါတ်လေး လှဲကြပါတော့ဟ . . email လောက်တော့ ပို့ကြပါဟ . . ချစ်တယ်လို့ ပြောကြပါတော့ဟ . . လက်ထပ်ခွင့်တွေ ပါတွေ ကောက်တောင်းပစ်ပါတော့ဟ . . ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲ တိုက်ပွဲတွေ ဝင်နေတော့တယ်။ ဒီကားထဲမှာ မင်းသမီးလေး Celine က Notra Dame ဘုရားကျောင်းကြီးကို လက်ညိုးထိုးရင်း “ one day . . Notra Dame will be gone ” လို့ ပြောသွားတယ်။ ဒီလောက် ခိုင်မာပြီး ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်တွေပြည့်နေတဲ့ ပြင်သစ်ပြည်က ဘုရားကျောင်းကြီး . . ဘယ်လိုလုပ် ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်မလဲဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ တွေးခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာခင်ကပဲ Notra Dame ကြီး မီးလောင်သွားရှာတာ တစ်ကမ္ဘာလုံး ဝမ်းနည်းပက်လက် မြင်ခဲ့ရတယ်။
ထားပါတော့လေ။ ကျွန်တော် ဒီ အချစ်စာကို အဆုံးသတ်တော့မယ်။
မြင်ယောင်ကြည့်ပေါ့ဗျာ။ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်သာ ဥရောပ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံပေါ်က ရထားပေါ်မှာ ကောင်လေး သို့မဟုတ် ကောင်မလေး ချောချော တစ်ယောက်ကို မြင်သွားမယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ကျောင်းကန်တင်း တစ်ခုမှာ ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒါမှ မဟုတ်လည်း ပွဲတစ်ပွဲမှာ ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒါမှမဟုတ်လည်း facebook ပေါ်မှာ ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒါမှ မဟုတ်လည်း ခရီးသွားရင်း ဖြစ်မှာပေါ့။ ခင်ဗျား သူ့ကို စကားသွားပြောမယ်။ နောက်တော့ ခင်ဗျားမိဘတွေ သူငယ်ချင်းတွေ ဆွေမျိုးတွေ အလုပ်ကိစ္စတွေ စတဲ့ ချိန်းဆိုထားတာ အားလုံးကိုမေ့ပြီး သူနဲ့အတူတူ လုပ်ချင်ရာ လျှောက်လုပ်ကြတယ်။
ပိုရင်ခုန်ဖို့ကောင်းတာက အဲ့ဒီနေ့လေးဟာ ခင်ဗျား တစ်ဘဝလုံးကို အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲပစ်မယ့် နေ့ကလေး ဖြစ်လာမယ်။ သူကလေးဟာ ခင်ဗျား ရဲ့ နှစ် ၆၀ – ၇၀ ကျော် ကြာမယ့် ဘဝထဲကို ၂၄ နာရီလောက်နဲ့ ဝုန်းခနဲ ရောက်ချလာမှာ။ ရင်ထဲ နွေးထွေးစရာကြီး။
အချိန်ထက် ပိုလှတဲ့ ပန်းအမျိုးအစား ဒီကမ္ဘာမှာ မရှိလောက်ဘူးထင်တယ်။ ဒီ ပန်းကလေးကို ဒါရိုက်တာကြီး Linklater က သူ့ ရုပ်ရှင်သုံးကားရဲ့ ဦးခေါင်းထက်မှာ ပန်ဆင်ပေးထားတယ်။ ပန်းကလေးတွေနားမှာ Jesse နဲ့ Celine ဆိုတဲ့ ပျားလေး နှစ်ကောင် ရစ်ဝဲနေတာ ဒီနေ့နဲ့ဆို ၁၈ နှစ် ရှိပါပြီ။
ကဲ . . ခင်ဗျား ဘာလုပ်မှာလဲ???
Gofiles Myanmar 1080p
(1.7GB) Download Filerocks Myanmar 1080p
(1.7GB) Download Archive Myanmar 1080p
(1.7GB) Download Openload Myanmar 1080p
#Before Midnight 2013 #Download Before Midnight 2013 Full Movie #Free Before Midnight 2013 Download
The Cokeville Miracle (2015) DVDRip